वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए पृथ्वीको अति ड’रला’ग्दो र’ह’स्य ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए पृथ्वीको अति ड’रला’ग्दो र’ह’स्य !
काठमाडौं । पृथ्वीको इतिहासमा यस्ता धेरै ख’तर’नाक जी’व थिए, जो वर्तमानमा भएको भए सायद मानव सभ्यताको शासन कहिल्यै हुने थिएन । हामी सबैले डायनासोरको बारेमा पढेका र सुनेका छौं, यी विशाल जीवहरूले धेरै वर्षसम्म पृथ्वीमा शासन गरेका थिए । यद्यपी लाखौं वर्ष पहिले पृथ्वीमा डायनासोरले मात्र शासन गर्दथे, तर अर्को जीव पनि थियो, जुन अहिले खुलासा भएको छ ।
हालै वैज्ञानिकहरूले सर्पको आफन्त भन्न सकिने ख’तर’ना’क जी’व पत्ता लगाएका छन् । यो डायनासोरको युगमा थियो, हाम्रो पृथ्वी कसरी जन्मियो र पुरातन युगमा के भएको हुनुपर्छ ? भन्नेजस्ता धेरै प्रश्नहरू छन्, वैज्ञानिकहरूले जवाफ खोजिरहेका छन् ।
यसै क्रममा अब वैज्ञानिकहरुले यस्तो ड’र’ला’ग्दो जीव पत्ता लगाएका छन् । अहिले पत्ता लागेको जीवले डाइनोसरलाई पनि ट’क्क’र दिन्थ्यो । त्यो हो, चार खुट्टा भएको सर्प । जसको लम्बाइ निकै छोटो थियो । पुरातन जीवको जीवाश्म अध्ययनबाट धेरै रहस्यहरुको खुलासा भएको छ । आफ्नो अध्ययनमा वैज्ञानिकहरुले यो सर्प नभई अर्कै प्रकारको राक्षस भएको बताएका छन् ।
कङ्गालको संरचनाको बारेमा कुरा गर्दा, यो पेन्सिल जस्तै थियो, त्यसको लम्बाइ ७.७ इन्च भएको अनुमान गरिएको छ । सर्पमा चारवटा खुट्टा राखेमा झन ड’र’लाग्दो देखिन्छ । अर्कोतिर अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकले उक्त जीव सर्प नभई नाम डोलिचोसौर भएको बताएका छन् । वास्तवमा डोलिकोसौरको जीवाश्म फेला परेपछि पहिलो नजरमा वैज्ञानिकहरूले यसलाई सर्पको नभई छेपारोको आफन्त भनेका थिए । तर त्यस्लाई सर्पको पुर्खा भएको अनुमान गरिएको छ ।
यो छेपारो पहिले समुन्द्रमा बस्ने गर्दथ्यो जुन अहिले समय संगै लोप भैसकेको छ । चार खुट्टा भएको यो लामो शरीरको छेपारो क्रेटासियस कालमा भेटिएको अनुमान गरिएको छ । जानकारी अनुसार ६.६ करोड वर्ष पहिले यो जीव अस्तित्वमा थियो ।
लाइभ साइन्सको रिपोर्ट अनुसार यो छेपारोको अस्तित्व आजभन्दा ६.६ करोड वर्ष पहिलेसम्म थियो । तिनीहरू लामो समयसम्म पृथ्वीमा घुमे, केही छेपारोहरू १४ करोड वर्ष पुरानो हुन सक्छन् । तपाईलाई जानकारी गराउ कि धेरै वर्षदेखि वैज्ञानिकहरू चार खुट्टा भएका सर्पहरू हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्थे । चार खुट्टा भएका सर्पको अस्तित्व लोप भए पनि सन् २०१६ मा भएको अनुसन्धानले करिब १५ करोड वर्षअघि खुट्टा भएका सर्पको अस्तित्व हराएको प्रमाणित गरेको थियो ।
वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरेको पेन्सिल आकारको जीवाश्म १२ करोड वर्ष पुरानो हो । खुट्टा भएको सर्पको सिद्धान्तको अन्त्य भएपछि अब वैज्ञानिकहरूले छेपारोबारे थप जानकारी जुटाउन थालेका छन् । वैज्ञानिकहरूले यस जीवाश्मलाई टेट्रापोडोफिस एम्प्लेक्टस नाम दिएका छन्, ग्रीकमा यस नामको अर्थ चार खुट्टा भएको सर्प हुन्छ ।
क्यानडाको एन्डामोन्टन युनिभर्सिटी अफ अल्बर्टाका जीवविज्ञानका प्राध्यापक माइकल काल्डवेलले उक्त जीवाश्मको जाँच गर्दा सर्प भित्रको संरचनाभन्दा पूर्णतया फरक रहेको बताए । यो अध्ययन स्टडी जर्नल अफ सिस्टेमेटिक पेलियोन्टोलजीमा प्रकाशित भएको छ ।
पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईलाई मातृशोक